Dhaqaatiir Swedish ah oo caqliga Soomaalida hadal lala yaabay ka sheegay | shumis.net
Home » Layaab » Dhaqaatiir Swedish ah oo caqliga Soomaalida hadal lala yaabay ka sheegay
Dhaqaatiir Swedish ah oo caqliga Soomaalida hadal lala yaabay ka sheegay
Labo dhaqtar oo Swedish ah ayaa fadeexad qabsatay ka dib markii ay internet-ka ku daabaceen hadalo lala yaabay oo ay wax uga sheegayaan caqliga Soomaalida. Dhaqaatiirtaan oo da’doodu tahay 47-sano iyo 61-sano jir isla markaana dhaqtar ahaa muddo dheer ayaa internet-ka ku qoray in dadka Soomaalida ah uu caqligoodu yahay mid hooseeya ah o ah 70% (IQ) halka dadka Swedishka ah uu yahay 102.
Ninka 47-sano jirka ah ayaa ayaa markii uu wargeyska Aftonbladet daba-gal ku sameeyay ayaa sheegay in uu ahaa mid ku sugan xaalad wareersan markii uu hadalkaan internet-ka ku qoray isla markaana uu hadda ka laabtay hadalkaasi.
Balse ninka kale ayaa ku adkaystay in hadalkiisa ku saabsan caqliga Soomaalida uu yahay mid sax ah oo ku dhisan baaritaan la sameeyay. Waxaa u intaas ku daray in dhamaan dadka ka yimaada wadamada ka hooseeya saxaraha uu caqligoodu hooseeyo. Ninkaan ayaa sidoo kale internet-ka ku qoray in inta badan shacabka Soomaalidu ay yihiin kuwo ku mashquulsan cunida khaatka iyo dambiilenimo.
Mar la waydiiyay in uu bukaanka Soomaalida ula dhaqmo si la mid ah kuwa kale maadaama uu hadalkiisa cunsuriyad yahay ayuu sheegay in uu taasi sameeyo.
Hadalka dhaqaatiirtaan ay ku daabaceen websiteyada cunsuriyiinta ayaa ah mid lagu qoslo balse muujinaya sawirka qaldan ee laga faafiyo Soomaalida ku dhaqan Sweden iyo sida ay cunsuriyiintu noogu isticmaalaan in aan nahay dad caqli yar isla markaana khaatka cuna.
Si kastaba ha ahaatee, ragga hadaladaan cunsuriyada foosha xun ku faafinaya internet-ka ayaa ah kuwo aan shaqada laga cayrin oo wali u adeegaya bulshada ay aflagaadeynayaan, taasoo muujinaya in Sweden aysan diyaar u ahayn in ay wax ka qabato cunsuriyada ka dhanka ah Soomaalida iyo dadka madoow.
Title: Dhaqaatiir Swedish ah oo caqliga Soomaalida hadal lala yaabay ka sheegay
Posted by Unknown, Published at October 26, 2016 and have 0 comments